Markii Meghan Markle u soo bandhigtay joornaal ay hayso Kate Middleton - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Markay Meghan Markle soo saartay joornaal ay la socoto Kate Middleton oo ku taal daboolka
Sawir hordhac ah! The Sun wuxuu ka soo baxay cadaabta diiwaanka Meghan Markle, oo ku taariikhaysan 2014, sidaa darteed afar sano ka hor guurkiisii ​​Amiir Harry. Labada mas'uul ayaa ka soo horjeedda kuxigeenka madaxa tifaftiraha joornaalka U, oo gacmihiisa ku haya nuqul daabacaadda ah kaas oo ka muuqda Une ... Kate Middleton! Aktarka taxanaha ah Dacwadaha Aad ayey uga fogtahay inay ogaato wakhtigaas inay la kulmi doonto isla aayaha ay la mid tahay Duchess of Cambridge iyo in kan dambe uu noqon doono soddohdeed.
Meghan Markle ayaa markaa ku tabarucday joornaalka, iyada oo la wadaagaya xulasho muraayadaha muraayadaha ah ee ay jeceshahay - oo ay kujirto halyeeyga Aviator-ka Ray-Ban. Waxay awood u yeelatay inay aragto dhadhanka waxa ay saxaafaddu samaynayso maadaama joornaalku ka sheekaynaayo uurka Kate Middleton. Waxay ahayd waqtigaas uur Charlotteiyo U soo sheegay warkii in duchess sugayay mataanaha ...
Filimka 'Snap' wuxuu muujinayaa Meghan Markle oo ku soo jiidaneysa daboolka Kate Middleton - labo sano kahor inta aysan gelin Amiirka Harry https://t.co/hNYAR8hKaO
- The Sun (@TheSun) August 14, 2019
Xaaskiisa William iyo xaaskiisa Harry hadda waa ay wanaagsan yihiin, ka dib rabshadaha qaar taas oo saxaafaddu ku celcelisay. Saldhigyada Wimbledon ka hor xagaaga, waxay u muuqdeen kuwo aad u murugsan. Meghan Markle qasab kuma aha inuu qulqulo, maxaa yeelay hadda, waa wada jir in ay sameeyaan bogga hore ee wargeysyada! Wixii ugu fiicnaa iyo kuwii ugu xumaa.
© Action Action / Bestimage
Catherine (Kate) Middleton, Duchess of Cambridge iyo Meghan Markle, Duchess of Sussex
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/royautes/quand-meghan-markle-posait-tenant-un-magazine-avec-kate-middleton-en-couverture-1012062